तनावमा दुर्गा प्रसाईं, सुनको लौरो पाएको भोलि पल्टै लाग्यो झड्का ! - Lekh-Patra
तनावमा दुर्गा प्रसाईं, सुनको लौरो पाएको भोलि पल्टै लाग्यो झड्का !
काठमाडौँ – संयुक्त अरब इमिरेट्स (यूएई)का राजकुमार शेख मोहम्मद माक्तुम जुमा ला माक्तुमले मेडिकल व्यवसायी तथा एमाले केन्द्रीय सदस्य दुर्गा प्रसाईंलाई उपहार दिएको ‘सुनको लौरो’ त्यसबारेको रहस्यको खोजी हुँदैछ ।
लौरो कुन माध्यमबाट झापा पुग्यो भन्नेबारे विमानस्थलस्थित भन्सार कार्यालय अनभिज्ञ छ । यस विषयमा भन्सार विभागले आन्तरिक रूपमा अनुसन्धान सुरु गरेको जनाएको छ।
उपहार प्राप्तकर्ता व्यवसायी प्रसाईंले आफूले राजकुमारबाट सुनको लौरो प्राप्त गरेको स्वीकार गरे। प्रसाईंले भने,“राजकुमारबाट सुनको लौरो उपहार प्राप्त भएको छ । उपहार पाएको वस्तु कति मूल्य र कुन गुणस्तरको हो भन्नु उचित हुँदैन ।” आफूले प्राप्त उपहार परीक्षण नगरेको भन्दै उनले सुनको लौरो सरकारलाई चाहिए उपहार दिन सक्नेसमेत बताए ।